Ighaghachi: mepụta Ọdịnaya Ka Mma Karịsịa | Martech Zone
Sunday, Jenụwarị 6, 2013 Tọzdee, Eprel 25, 2013 Douglas Karr
Mgbe m na-arụ ọrụ Ngwakọta, naanị ọdịiche dị n'etiti ihe ịga nke ọma ụlọ ọrụ ịde blọgụ mmemme na ndị ahụ lụrụ ọgụ bụ olu dị mkpa, ọdịnaya dị ịrịba ama nke ha nwere ike ịmịpụta. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị na nke a ka bụ nsogbu na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ahịa ọ bụla ma ọ bụ atụmanya anyị nwere mgbe a bịara n'ịmepụta usoro ịzụ ahịa ọdịnaya ha.
E nwere ihe ole na ole… enweghị ego, na-agbanye maka izu oke ọdịnaya, na nke ikpeazụ bụ amaghị ihe ị ga-ede. Ọ dị ịtụnanya na ụlọ ọrụ nwere ike ịmepụta ọtụtụ narị ozi ịntanetị na atụmanya na ndị ahịa na-enyere ha aka ịga nke ọma, mana ha na-anọdụ ala na ihe ederede ederede ederede ma ha na-agbaze.
Bugharịa bụ ikpo okwu na-enyere ndị otu blọgụ gị aka iwepụta echiche na ọdịnaya maka usoro ịde blọgụ ụlọ ọrụ gị:
Atụmatụ na nnyocha - Mepụta usoro ọdịnaya na nchịkọta akụkọ gbasara echiche isiokwu, usoro ụlọ ọrụ na ndị otu (na ndị ọbịa) nka.
Mepụta na rụkọta ọrụ - Smart mmekota site na usoro mmepe ọdịnaya. Mee ndị otu gị, ndị ọbịa na ndị ọrụ ngo ọrụ ọsọ ọsọ.
Kwalite ma kekọrịta - Ntughari aka ma jikọọ na ndị na-akwado akara na ndị na - eme ihe maka mkpụrụ ka mma na nkesa ọgụgụ isi karịa.
Nye ọnụahịa dị oke ọnụ, bido na $ 29 kwa ọnwa maka ndị ọrụ 5 ruo $ 299 kwa ọnwa maka ndị ọrụ 70! Bipụta ozugbo site na WordPress, Tumblr na ndị ọzọ dị ka ihe ederede ma ọ bụ ibi ndụ, ma ọ bụ detuo koodu HTML na otu pịa maka nkesa ngwa ngwa.
Tags: mmekorita ọdịnayaihe di n’imeụlọ ọrụ ịde blọgụmegharia